अविवाहित पुरुषको ओछ्यान तताउने अनौठो सेवा दिन्छन्यी युवती ! — OnlineDabali
अविवाहित पुरुषको ओछ्यान तताउने अनौठो सेवा दिन्छन्यी युवती !
Posted on February 22, 2017 by अनलाइन डबली
रसिया, मस्कोकी एक युवतीले आफ्नो अतिरिक्त कमाईको लागि निकै नौलो र भिन्न तरिका अपनाएकी छिन् । उनको काम निकै रोचक छ – कुनै एक व्यक्तिको ओछ्यान तताउनका लागि एक घण्टासम्म सुत्ने, सकारात्मक ऊर्जा भरिदिने र मिठो निन्द्राको ग्यारेन्टी दिने ।
२१ वर्षीया भिक्टोरिया इभाच्योभालाई भाडामा लिएर मानिसहरुले आफ्नो ओछ्यान तताउने गर्दछन् जसका लागि उनलाई प्रत्येक रातको ८२ डलर र मासिक रुपमा १७ सय डलर प्रदान गर्छन् ।
पत्याउनुस् वा नपत्याउनुस्, उनले अहिलेसम्म १० जना ग्राहकको ओछ्यान तताइसकेकी छिन् । उनीबारे स्थानीय संचारमाध्यममा समाचार आइरहँदा उनको यो व्यवसाय निकै फस्टाउने अनुमान गरिएको छ ।
वास्तवमा, ग्राहकको मागलाई सम्बोधन गर्न भिक्टोरियाले ओछ्यान तताउने एक महिलाको समूहलाई तयार पारिसकेकी छिन् ।
उनले यी सबैकुरा कसरी गर्छिन् त ? यो वास्तवमा नै सजिलो छ । कुनै ग्राहकले उनको वेबसाइटमा रिक्वेट पठाएपछि उनले ती ग्राहकलाई फोन गर्छिन् र आफ्नो सेवा सुविधाबारे विस्तृत जानकारी दिन्छिन् ।
यदि उनले तोकेको सबै शर्त, सुविधामा ग्राहकको मञ्जुरी भए, ओछ्यान तताउने दिन तय गरिन्छ । तोकिएको समयमा ग्राहक सुत्नुभन्दा एक घण्टा अघि भिक्टोरिया पाइजामा लगाएर ग्राहकको ओछ्यानमा पल्टिन्छिन् ।
उनी सुतिरहेको बेला ग्राहकले उनीसँग कुराकानीसमेत गर्न सक्छन्, यदि ग्राहकले चाहेको खण्डमा । भिक्टोरिया भन्छिन्, ‘म मानिसहरुको कुरा सुन्न सक्छु । धेरैजसो मानिसहरुले आफ्नो व्यक्तिगत कुरा परिचितसँग भन्दा पनि अपरिचितसँग गर्न मनपराउँछन् ।’
एक घण्टा बितेपछि उनी लुगा फेर्छिन् र त्यहाँबाट निस्किन्छिन् । ओछ्यान तताउनु अघि वा पछि, उनले कतिबेला पैसा लिन्छिन् भन्ने विषयमा भने जानकारी उपलब्ध छैन । भिक्टोरियाका अनुसार उनले ओछ्यान तताउनुका साथै ग्राहकलाई आफ्नो सकारात्मक ऊर्जा सारेबापत् पनि लिने गरेको बताइन् ।
मानिसहरु सँगको छोटो कुराकानीपश्चात् नै उनले आफ्नो सकारात्मक ऊर्जा सार्न सक्ने क्षमता आफूसँग भएको बताइन् । आफूले निश्चित रुपमा के गर्ने भन्ने थाहा नभएपनि आफूसँग केही भिन्न शक्ति भएको उनको दाबी छ ।
उनको सुरुवाती लक्ष्य अविवाहित पुरुष भएपनि उनी प्रत्येकलाई यो सेवा प्रदान गर्न चाहेको बताउँछिन् । कोही महिलाले पनि आफूलाई यस्तो सेवाको लागि आग्रह गरे उनले ती महिलालाई पनि सहयोग गर्न चाहेको बताइन् ।
२१ वर्षीया यी युवतीले रसियाली लेखक एनातोली म्यारियनगोफको एउटा किताब पढेपछि यस्तो सोच आएको जानकारी दिइन् ।
कुमार-कुमारी बन्ने प्रतिस्पर्धाले जापानमा सन् ३७६६ मा एक जना मात्र जीवित !
आँखा र नाक नभएकी हँसिली युवती
Posted in रोचक बिचित्र | Leaveareply
आज दर खाँदै
मिस नेपाल खतिवडाले भक्तपुरको गाईजात्रा क्लिपमा लाने
उपत्यकामा ७ वटा हरियाली पार्क बनाउन सुरु
आज हुने कन्सर्टका कारण अनमोल अमेरिका गएनन्
‘गाईजात्रा २०७५’ कोे व्यङ्गय सरकारले पचाउन नसक्नेः कलाकारहरु
जिवनमा सफलता हाँसिल गर्न
ट्रम्पले ‘पोर्न स्टार’ लाई पैसा दिएको खुलासाः पूर्व वकिल कोहेन
फेवाताल मुद्दाको पेसी स्थगित, अर्को पेसी कार्तिक १३ गते